प्र.अ. छोडेर गाउँपालिका प्रमुखमा उम्मेदवारी – Gulmiews
प्र.अ. छोडेर गाउँपालिका प्रमुखमा उम्मेदवारी
१७ जेष्ठ २०७४, बुधबार १३:३२ गुल्मिन्युज
गुल्मी जेठ १७ । दोस्रो चरणमा हुने स्थानिय तह निर्वाचनमा गुल्मीका एक प्रतिष्ठित बोडिङ्गका प्रिन्सिपल गाउँपालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवार बनेका छन् । जिल्लाको सदरमुकाम तम्घासमा रहेको अर्जुन बोडिङ्ग स्कुलका प्रिन्सिपल दानबहादुर केसी गाउँपालिका प्रमुखमा उम्मेदवार बन्ने भएका छन् ।
एमाले गुल्मीको बिभिन्न मातहतका कमिटीहरुमा जिम्मेवारी पुर्वक काम गरेका केसीलाई पार्टीमा लामो कामको मुल्याङकन गर्दै उम्मेदवार बनाएको छ । झण्डै ३४ वर्ष लामो समय सम्म प्रिन्सिपलमा रहेर शिक्षण क्षेत्रमा उल्लेखनिय योगदान दिएका केसी नेकपा एमालेको तर्फबाट जिल्लाको मदाने गाउँपालिका प्रमुखमा उम्मेदवार बनेका छन् । २०५० साल देखि उक्त बोडिङ्गको प्रिन्सिपलमा रहेर जिल्लाको प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाको रुपमा स्थापित गर्न सफल केसी बौद्धिक तथा सबै माझ परिचित व्यक्तिका रुपमा स्थापित रहेका छन् ।
लामो समय सम्म प्रिन्सिपल पदमा रहेका केसीले उक्त बोडिङ्गलाई जिल्लाकै उत्कृष्ट बिद्यालयको रुपमा परिचित बनाउन सफल भएका छन् । बोडिङ्गको प्रिन्सिपल सगै जिल्लाका धेरै संघ संस्था सगै पार्टीको काम पनि महत्वपूर्ण पदमा रहेका जिम्मेवारी समालेका केसी हाल नेकपा एमालेको बुद्धिजिवी परिषदका केन्द्रिय सदस्य हुन ।
बुद्धिजिवी परिषद गुल्मीको २० वर्षे लामो समय सम्म अध्यक्ष पदमा रहेका केसी पार्टीको सल्लाहाकार समिति संयोज रहेका छन् । शिक्षा सगै समाजसेवा बाट समाज परिर्वतन गर्नुपर्छ भन्ने मुल्य र मान्यताका साथ अघि बढेका केसी जिल्लाका सबै माझ स्थापित शैक्षिक व्यक्तित्वका रुपमा स्थापित छन् । केसी समाजमा केहि गर्नु पर्छ र गरे सबै पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने जिल्लाका उदारणिय पात्रका रुपमा स्थापित छन् ।
शिक्षण पेसाबाट समाज सेवामा सर्मपित केसी जनताको सेवाको निम्ती वडा अध्यक्षमा उम्मेदर दिने निर्णय गरेको बताए । समाज परिर्वतन र समाज सेवा मेरो मुख्य लक्ष्य हो उनले भने ‘राजनितिले समाज परिर्वतन गर्दछ त्यसको निम्ती म एउटा पुल बनेर काम गर्ने छु ।’ शिक्षाले चेतना दिन्छ राजनितिले समाज परिर्वतन गर्छ त्यसको बिचमा म हुँने छु केसीले भने ‘समाज सेवा र समाज परिर्वतनमा मेरो मुख्य लक्ष्य हो ।’
बिकासमा मुख्य जोड रहने छ
शिक्षा, स्वास्थ्य,सडक खानेपानीमा लगायतमा सबैको पहुंचु पु¥याउने आफनो पहलकदमी रहने छ केसीले भने ‘वीशेषगरी कृषिमा आधुनिकीकरण ,व्यवसायीकरण र पर्यटनलाई अगाडी बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।’ अहिले बढदो बेरोजगारीलाई अत्य गर्न व्यासायिक कृषिलाई जोड दिए राष्ट्र र यस देसका जनता आत्मा निर्भर बन्न बलियो माध्यम बन्ने छ त्यसको निम्ती कृषिलाई व्यावसायिक कृषि बनाउनु पर्ने केसीको जोड छ ।
केसीले भने ‘हाम्रो देसका धेरै सम्भावनाहरु छन् त्यस मध्ये आत्मा निर्भर र आर्थिक स्तरमा बृद्धि गर्न पर्यटन पनि प्रचुर संभावनाहरु छन् ।’ यि सबै सम्भावना र बिकासको निम्ती नेकपा एमालेलाई बिजयी गराउनु पर्नेमा केसीले जोड दिए । बिकास र परिर्वतनको स्वाद जनतामा देखिने र नमुना हुने गरि दिलाउने केसीले बताए ।
बिगत देखि नै एमालेको बलियो आधारको रहेको उक्त गाउँपालिमा हाल पनि एमाले बलिायो संगठनका रुपमा रहेको स्थानियहरुको भनाइ छ । पार्टाको बलियो संगठन रहनु र एउटा सामाजिक व्यतित्वका रुपमा स्थापित ब्यक्ति उम्मेदवार बन्ने भएपछी मतदाताहरुमा छुट्टै माहोल आएको कार्यकर्ताहरु जनाउछन् ।